पोर्चुगलको सर्वोच्च अदालतद्वारा आफ्नो नवजात बच्चालाई डस्टबिनमा फाल्ने महिलाको रिहाइको अनुरोध खारेज, राष्ट्रपति मार्सेलोको कुरा पनि सुनेन अदालतले ! - VOICE OF NEPAL
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०१:५१
449 ??? ???????
सर्वोच्च अदालतले लिस्बनको इकोपोइन्टमा आफ्नो नवजात शिशुलाई फोहोरको टोकरीमा फाल्ने महिलाको हाबीज कर्पस याचिका खारेज गरेको छ । पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो साउजाले महिलाको पक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर अदालतले राष्ट्रपतिको कुरा समेत सुनेन।
२२ वर्षीय घरबारविहीन महिला अहिले टायर जेलमा हिरासतमा छिन् ।लिस्बनको डस्टबिनमा आफ्नो नवजातलाई छोड्ने आइमाईलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई बच्चा हत्याको अभ्यासको अभियोग लगाइएको छ।
नवजात शिशुलाई घरबारविहीन व्यक्तिले बिनाको फोहोर हेर्दैगर्दा फेला पारेका थिए। बच्चा फेला पार्दा गर्भ नाल समेत रहेको थियो। फोहोरको बिनम फेला परेका ति बालकको लिस्बनको डोना एस्टेफनिया अस्पतालमा उपचार भएको थियो ।
डोना एस्टेफिनिया अस्पतालमा बाल आपातकालीन कोठामा भर्ना भइसकेपछि उनलाई “लगभग कम से कम हेरचाह” चाहिएको थियो। नवजात शिशुलाई “जटिल चिकित्सा र शल्य चिकित्सा हेरचाहको आवश्यकता नभएपछि ” अल्फ्रेडो दा कोस्टा मातृत्व अस्पतालमा सारिएको थियो ।
वकिलहरूको एउटा समूहले युवतीको तत्काल रिहाइ (‘हबिस कर्पस’ ) का लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए , किनभने उनीहरू हिरासतलाई ‘एकदमै अवैध’ ठान्छन्।
वकिल डे माटोस एक जना वकिलले विचार गरे कि नागरिकले गरेको अपराध “प्राय जसो बारम्बार उल्लेख गरिएको (हत्याको प्रयास) होईन, तर परित्यागको पर्दाफास, जसले पुर्व परीक्षण अघि हिरासत पनि लिन दिदैन”।